Wararkii u dambeeyey ee Shirkii Jubooyinka iyo Gedo ee Nairobi – PUNTLANDER Gabaygii Khaliif Shiikh Maxamuud
WararkaDaawo:Madaxda sare ee xisbiga Horseed oo booqasho...
- Daawo:Madaxda sare ee xisbiga Horseed oo booqasho ku jooga Magalada Carmo Daawo Muqaal :Xildhibaanada beesha Darood oo maanta lagu bahdilay Magalada Muqdisho Madaxweynaha Somalia xasan culusow oo ka hadlay Somaliland iyo kismaayo Muxuu ka yari ? Daawo Muqaalo 18may Hargisa oo udaabal degatay sanaguuradii 22aad ee Somaliland iyo laasacanod oo qashinka iska gureysa . Kismaayo oo ay gareen waftigii xaqiiqa raadinta IGAD HOME
Published On: Thu, Jul 19th, 2012 Wararka | By Admin Wararkii u dambeeyey ee Shirkii Jubooyinka iyo Gedo ee Nairobi
Tags Wararkii u dambeeyey ee Nairobi ka imanaya ayaa waxay sheegayaan. In ilaa iyo hada aanan la ogeyn. Xiliga uu qabsoomi doono. Shirkii maamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo.
Ilo xog ogaal ah ayaa shabakada Afmadownews u sheegay in kooxaha Raas-kambooni iyo Ahlu-Suna ay soo jeediyeen. In ergada wax dooranaysa. Laga soo xulo 15-ka degmo ee Jubada Dhexe, Jubada Hoose iyo Gedo. Ka dibna shirka loo raro gudaha soomaliya. Oo doorashada ay ka dhacdo degmada Afmadow. Oo ah magaalo madaxda labaad ee jubada hoose.
Azaaniya ayaa iyadanu qabta in doorashada ay ka dhacdo Nairobi. oo markaasi ka dib la aado. Gudaha soomaaliya. Kooxda Harti Group aya ailaa hada iyadu aanan soo gudbinin taladooda. Sidoo kale IGAD ayaa ku kala qaybsan ra’yiga la soo jeediyay.
Waxayna u muuqataa in arimaha la isku hayo ay koox walba ka eegayso danteeda. Sheekh Axmed Madoobe oo shalay la kulmay wakiilo IGAD ka socda ayaa ku adkaysanaya. In Doorashada Madaxweynaha ay ka dhacdo magaalada Afmadow. Si loo helo kalsoonida dhabta ah. Ee dadka deegaanka.
Sidoo kale kale Ahlu-suna ayaa sheegaysay. In Afmadow la isugu tagi karo. Ayna marti galain karyto ergada wax dooranaysa.
Daawo:Madaxda sare ee xisbiga Horseed oo booqasho ku jooga Magalada Carmo
Daawo Muqaal :Xildhibaanada beesha Darood oo maanta lagu bahdilay Magalada Muqdisho
Madaxweynaha Somalia xasan culusow oo ka hadlay Somaliland iyo kismaayo Muxuu ka yari ?
Daawo Muqaalo 18may Hargisa oo udaabal degatay sanaguuradii 22aad ee Somaliland iyo laasacanod oo qashinka iska gureysa .
Kismaayo oo ay gareen waftigii xaqiiqa raadinta IGAD
Dagaal ka dhacay Kismaayo
Daawo muqaal Mudaharaad balaaran oo ka dhacay Puntland oo lagusoo dhoweynayo Madaxda Jubaland
Daawo, Muqaal Qaabka ay u dhacday Doorashada madaxweyne kuxigeenka Jubaland Gen farataag
Daawo;Madaxweyne ku xigeenka Jubaland Gen Abdulaahi oo loo dhaariyay Maanta
Deg Deg Xaflad balaaran oo lagu caleema sarayo Madaxweynaha Jubaland oo ka socota Magalada Kismaayo
BARE HIIRAALE IYO XILDHIBAANO LAGA MUSAAFURIYAY MAGALADA KISMAYO
FARXADA DAWLADA JUBALAND IYO BAROORTA MOGDISHO
Daawo hees macan ,taniyo Gedo Garoowe, ilaa laasqoray Taleex, Shaxdiyo Jubaland ayan agaar uleenahay
Ururuka Midnimo oo qaadacay Doorashada Puntland mar 2aad ,akhriso
Madaxweyne kuxigeenka Puntland: Bosaaso waa wadnaha Puntland in aan ka shaqeyno horumarkeeda waa wajib
Dawo:Muqaal shacabka reer Puntland maxay ka dhehen doorashada Axmed madoobe iyo shegashadii Bari hirale
Daawo Sawiro : Haweenka Puntland oo tageeray Ahmed madobe ,digniina ujeediyay Bare Hiiraale
Goalaha Midnimada Puntland oo tageeray Madaxweynaha Jubaladn axmed Madoobe
Sir labad oo laga helay GOS ( Qoraal ay is dhaafsadeen Eenow iyo Tarabi
Duqayda dhaqanka Beelaha Hawiye oo ka hadlay Doorashada Madaxwayne ee Jubbaland